Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo Jaamacadaha ka Caawineysa kor u qaadida Tayada Aqoonta[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo Jaamacadaha ka Caawineysa kor u qaadida Tayada Aqoonta[Sawirro]
Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntkand ayaa maanta Tababar ku saabsan Tayeynta waxbarashada sare u qabatay qaar kamid ah Shaqaalaha Jaamacadaha Puntland.
Barnaamijkan oo ah waa Iftiin ayaa Hay’adda CARE ka caawineysaa Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland,waxaana uu socon doonaan muddo afar maalmood ah.
Furitaanka Tababarkan ayaa waxaa ka qeybgalay Wasiirka Waxbarashada Puntland ,Wasiir kuxigeenka ,Agaasimayaasha Wasaaradda iyo bahda Waxbarashada ee la shaqeeya Wasaaradda iyo ka faa’ideystayaasha.
Agaasimaha Waaxda Tacliinta sare ee Waxbarashada Puntland Cabdullaahi Cali Jaamac oo ka hadlay muhiimada Tababarkan ayaa sheegay in uu yahay mid qeyb ka ah kor u kaca tayada Waxbarashada sare.
Wasiir kuxigeenka Waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa sheegay in Tababarkan uu noqonayo mid joogto ah isla markaana ay Wasaaradda waxbarashadu ku dadaaleyso wax ka qabashada tayada aqoonta.
Wasiirka Waxbarashada Dowladda Puntland Abshir Aw Yuusuf ayaa dhankiisa kula dardaarmay ka faa’ideystayaasha iney waqtigooda u huraan ka faa’ideysiga casharada ,isagoona xusay in si gooni ah isha ugu hayn doonaan Tacliinta sare Jaamacadaha.
Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa wada sanadkan wax ka bedelka heerka Waxbarasho ee Jaamacadaha kuyaala Puntland ,waxaana isla sanadkan la higeliyey Barnaamijka (E-Gnary) Maktabada Internetka 00 10 Xarumood oo Jaamacado u badan ka hirgelisay.